HERBICIDE "PRIMA": FOOMKA SII DEYNTA, SHARAXAADA, HALABUURKA, BARISTA - HERBICIDES
Sida loo isticmaalo geed-geedka "Prima": tilmaamaha isticmaalka daroogada
Herbicide "Prima" - waa habab caan ah oo wax ku ool ah oo loogu talagalay ilaalinta dalagyada laga soo qaato 160 nooc oo ah cawska sanadlaha ah iyo labo sano ee qoyska Dicots.
Waxaa loo isticmaalaa dalagyadaas: sarreen, galley, shaciir, masago, masaggo, hadhuudh.
Foomka fasaxyada iyo sharaxaadda geedka
Waxaa la heli karaa qaab ka mid ah emulsion diirada saaran ee weelasha 5 litir.
Ubaxii ayaa caan ku noqday beeraha iyo beeraha guriga "Prima" sababo la xiriira sifooyinka noocaas ah:
Si firfircoon uga hortag korniinka: ambrosia, noocyada kala duwan ee chamomile, madow nightshade, beero yamaar, dhammaan noocyada jilicsan.
Xawaaraha - saameyntu waa mid la dareemo inta lagu jiro maalinta ka dambeysa isticmaalka daroogada.
Awoodda aad ku sameyn karto heerkul ah 5 ° C iyo ka sare.
Muddada codsiga - "Prima" si firfircoon ayuu u dagaallamaa cawska marxaladaha kala duwan ee koritaankooda.
Noocyo badan oo dhirta la caydhiyay, wadarta guud oo ah 160, waxtarka sarreeya ee leh qashinka isku dhafan.
Ma saameynayo wareegga. Wixii xilli xiga ka dib markii Prima, beerta aad ku beeran kartaa dalagyada cruciferous: kaabajka, mustard.
Ma taqaanaa? Saamaynta cagaarka ee sulfate ayaa laga helay 1897, 1908-kii Argon Bolley waxay daabacday xog ku saabsan isticmaalka xaydhayaasha sodium iyo sulfate-ferrada si loo burburiyo haramaha miraha geedka.
Farsameynta ficilka walaxda firfircoon
Waxtarnimada "Prima", isticmaalka kaas oo kuu oggolaanaya inaad tirtirto ilaa 95% haramaha, waxay bixisaa laba walxo firfircoon leh mabaadi'da kala duwan ee ficilka:
Florasulam - waxay horjoogsataa dhajinta amino acids ee haramaha, waxyaabaha - 6.25 g / l.
Ether 2.4-D - si dhakhso ah u gashaa caleemaha haramaha iyo walxaha hawsha hormoonka hormaraya koritaanka dhirta, 452.42 g / l.
Sidaa darteed, daawada geed-leyska-la-soo-baxa waxay saamaysaa caws oo u nugul ugu yaraan mid ka mid ah walxaha firfircoon.
Waxaad isticmaali kartaa herbicides si loo xakameeyo haramahaaga aaggaaga: Agrokiller, Zenkor, Lazurit, Lontrel-300, Ground, Titus, Stomp.
Teknoolajiyada iyo tilmaamaha isticmaalka
Geedaha waxaa lagu buufin karaa xalka diirriga biyaha. Waqtiga ugu fiicneyn ee lagu shaqeynayo waa guga, marka dhirta ay leeyihiin 2-8 caleemo run ah. Inta lagu jiro muddadan, waxay aad ugu nugul yihiin qaybaha ka soo goosashada.
Ka hor intaadan la shaqeynin herbicide Prima, si taxaddar leh u akhri una raac tilmaamaha isticmaalka.
Qalabka warshadaynta waa in si fiican loo xakameeyaa, la isugu hagaajiyaa celceliska shucaaca caadiga ah.
Isticmaalka naanaha la jeexay ayaa lagula talinayaa.
Markaad samayso xalka shaqada, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso saadaasha cimilada, 24 saac ka hor iyo ka dibba, waa inuusan lahayn baraf.
Heerkulka ugu fiican ee hordhaca ah waa laga bilaabo +8 ilaa + 25 ° S.
Waa muhiim! Haddii maaddooyinka la soo jeediyey ay ka badnaayeen, geedislaha xushmadda leh ayaa burburin kara dhammaan dhirta aagga.
Heerarka isticmaalka dalagga kala duwan
Qiyaasta codsiga daawada halkii 1 hektar waa 0.4-0.6 l. xoogga saar, iyadoo ku xiran:
marxaladaha horumarinta iyo cufnaanta cawska;
Si aad u diyaariso xalka loogu talagalay buufinta, diirada waxaa lagu qasi karaa biyo. Isticmaalka xalka halkii 1 hektar - 150-400 litir. Midho, guga iyo jiilaalka, dhoobada - dalagyada la shaqeynayo marxaladda dhalada ka hor inta dhirta gasho tuubada ama foomka 2 internodes marxaladaha hore ee horumarinta weedka. Isticmaalka 1 hektar:
xoojinta - 0.4-06 l;
xalalka aqueous - 200-400 l.
Corn iyo masagada waxaa lagu buufiyaa muuqaalka 3-5 caleemaha dalagyada beeraha iyo marxaladda hore ee horumarinta haramaha. Heerka isticmaalka halkii 1 hektar oo litir ah:
Fiirinta - 0.4-06,
xal aqueous - 200-400.
Corn waa la baari karaa sidoo kale wajiga of 5-7 caleemo, isticmaalka diyaarinta halkii 1 hektar ayaa loo kordhiyey 0.5-0.6 l.
Waa muhiim! Tijaabada loogu talagalay diyaargarowga diyaargarowga ayaa la sameeyaa ka hor inta aan la isku dardarin, laysku geynayo qadar yar oo ah weel gaar ah.
U raacsanaanta geedaha la daroogooyinka kale
Herbicide "Prima" waxay ku habboon tahay badeecooyinka badbaada dhirta:
Bacriminta nitrogen (dareere);
xakamaynta koritaanka dhirta;
Daroogadu waa sunsho yar, oo lagu sifeeyo fasalka 3:
Markaad la shaqeyneysid diirada iyo xalinta shaqada "Prima", waa inaadan cabin, sigaar cabin, cunin, adigoon marka hore gacmahaaga dhaqin, wejiga ama isbeddel dharka.
Waxaa lagama maarmaan ah in lala shaqeeyo xoojinta iyo xalka shaqada iyadoo la adeegsanayo qalab ilaalin: gacmo gashi, muraayado, neefsasho.
Pesticides waxaa laga yaabaa in lagu buufin karaa meel fog oo ammaan ah iyo dhinaca dabaysha.
Ka bixitaanka dadka ee goobta shaqada si ay u qabtaan shaqada waxaa la oggol yahay 72 saacadood ka dib marka la shaqeynayo.
Xaaladaha kaydinta iyo nolosha shelf
Ilaalinta amniga iyo tayada, "Waan aqbali doonaa" sida waafaqsan tilmaamaha waxaa lagu kaydiyaa qol qallalan ee weelka daboolan xaaladaha noocaas ah:
Heerkulka wuxuu ka jiraa -10 ° C ilaa + 35 ° C
Nolosha shimbirta Prima waa 3 sano.
Ha kululeyn ama jabin daroogada.
Lama oggola inuu ku dhaco daroogada daroogada, qorraxda tooska ah.
Carruurta iyo xayawaanka looma ogola goobta kaydka.
Ma taqaanaa? Xilligii dalabka warshadaha ee warshadaynta beeraha ayaa bilaabmay 1938, Faransiiska wuxuu u muuqday daroogada "Sinox" ee daaweynta beeraha hadhuudh, dalagyo iyo dalagyo khudradeed.
Fikradda waxaa loo kaydiyaa si gooni ah:
quudinta iyo suunka;
daawooyinka, daawooyinka iyo caafimaadka xoolaha;
walxaha ololi kara iyo qalab casri ah.
Isticmaalka xoojinta iyo xalinta shaqeynta "Prima" waxay kuu ogolaaneysaa inaad si deg-deg ah oo firfircoon uga takhalusto haramaha, si kor loogu qaado dhalidda iyo tayada alaabada koreysa. Markaad isticmaasho sunta cayayaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco xeerarka amniga, qiyaasta iyo diirada daroogada, sidaa darteed iska ilaalinta kharashyada iyo halista aan loo baahnayn.